Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Kaarka Lambarka Bulshada ee Cusub
Shirkado badan ayaa si fudud u codsan doona lambarkaaga kaarka Lambarka Bulshada sababtoo ah waa hab degdeg ah oo sahlan oo ay ku aqoonsan karaan macaamiisha.
Nasiib darro, tuugada aqoonsiga waxay isticmaali karaan lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga si ay u xadaan aqoonsigaga. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad ilaaliso oo marka la xado, aad hubiso inaad hesho beddelaad. Laakiin xaaladaha aanad hore u helin mid, waa muhiim inaad mid codsato.
Maqaalkani waxa uu bixiyaa hage buuxa oo ku saabsan sida loo codsado kaarka cusub ee badbaadada bulshada. Si taxadar leh u akhri!
Waa maxay Kaadhka Lambarka Bulshada?
Lambarka Bulshada (SSN) waa lambar sagaal-god ah oo la siiyo muwaadiniinta Mareykanka, deganeyaasha joogtada ah, iyo deganeyaasha ku meel gaarka ah (shaqaalaha) ee gudaha Mareykanka sida waafaqsan qodobka 205(c) (2) ee sharciga Lambarka Bulshada (42 USC 405) c)) (2).
Maamulka Lambarka Bulshada, oo ah wakaalad madaxbannaan oo ka tirsan dowladda Mareykanka, ayaa lambarka siisa shaqsiga. In kasta oo tirada loo sameeyay in lagu caawiyo Maamulka Lambarka Bulshada in ay la socdaan dadka, haddana waxa ay markaas isu bedeshay lambarka aqoonsiga qaranka ee canshuuraha iyo arrimo kale.
Waxaad heli kartaa nambarka Sooshal Sekuuritiga adiga oo buuxinaya foomka SS-5, Codsiga Lambarka Bulshada. Ogow, Kaararka Lambarka Bulshada waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro kala duwan.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Codsado Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta ee Colorado
Waa maxay Noocyada Kaarka Lambarka Bulshada?
SSA waxay soo saartaa saddex nooc oo kaararka Lambarka Bulshada:
1. Nooca koowaad ee kaarka ayaa muujinaya magaca qofka iyo lambarka Bulshada oo keliya. Kani waa kaarka dadka badankiisu haystaan ​​oo ka tarjumaya xaqiiqda ah in qofka haystaa uu ka shaqayn karo Maraykanka xad la'aan. Waxay kaadhkan ku siinayaan:
Muwaadiniinta Maraykanka, ama
Dadka aan muwaadinka ahayn ee si sharci ah loogu oggolaaday Maraykanka degenaanshaha rasmiga ah, ama ka haysta ogolaanshaha Waaxda Amniga Gudaha (DHS) inay si joogto ah ugu shaqeeyaan Maraykanka, sida qaxootiga, magangalyo-doonka, iyo muwaadiniinta Isafgaradka Wadamada Ururka Xorta ah.
2. Nooca labaad ee kaarku waxa uu wataa, marka lagu daro magaca qofka iyo nambarka Bulshada, halyeyga, "UMA SHAQEEYNIN SHAQO". Kaarka noocaan ah waxaa la siiyaa dadka aan muwaadiniinta ahayn kuwaas oo:
ma haysto ogolaanshaha DHS ee shaqada, laakiin waxaad helaysaa faa'iido ay federaalku maalgeliso; ama
si sharci ah ayey Maraykanka ku joogaan oo ma haystaan ​​ogolaanshaha DHS inay ku shaqaystaan, laakiin, waxay hoos yimaadaan sharciga gobolka ama deegaanka kaas oo uga baahan inay bixiyaan SSN si ay u helaan gargaarada guud.
3. Nooca saddexaad ee kaarku waxa uu wataa, marka lagu daro magaca qofka iyo nambarka Bulshada, halyeyga, "SHAQAADA SHAQADA OO KALIYA OO OGOLAANSHAHA LAGU SAMEEYO." Kaarkan waxaan siinaa dadka haysta ogolaanshaha DHS inay si ku meel gaar ah uga shaqeeyaan Maraykanka
Haddii aad tahay qof aan dhalasho ahayn, waa in aan ku xaqiijinaa dukumeentigaaga DHS ka hor inta aanan bixin kaarka SSN. Waxaan ku siin doonaa kaarka laba maalmood gudahooda ka dib markaan xaqiijinta ka helno DHS. Inta badan, waxaan si dhakhso ah ugu xaqiijin karnaa dukumeentigaaga onlaynka ah DHS. Haddii DHS aysan ku xaqiijin karin dukumeentigaaga internetka, waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad ama ilaa saddex bilood in laga jawaabo codsiga Lambarka Bulshada. Faahfaahin dheeraad ah, fadlan eeg jawaabta su'aasha Inta badan la isweydiiyo, Sidee SSA u ilaalinaysaa lambarada Lambarka Bulshada?
Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba nooc oo kaararka Lambarka Bulshada ah oo xaddidan:
"Ma shaqeynayo shaqada," mid ayaa yiri. Kaararkan looma ogola sida liiska C dukumeenti ahaan ee foomka I-9 loomana isticmaali karo caddaynta ogolaanshaha shaqada.
"Shaqo ku shaqaynaysa kaliya ogolaanshaha DHS," ama "ku shaqeeya kaliya ogolaanshaha INS," midda kale ayaa leh.
Waaxda Amniga Gudaha, Waaxda Xuduudaha ee dalka, ayaa kaararkan siisa dadka haysta ruqsadaha shaqada ee ku meel gaarka ah ee Maraykanka.
Haddii ay la socdaan kaarka oggolaanshaha shaqada, waxay buuxin karaan shuruudaha I-9. Magaca iyo nambarka qofka kaadhka sita ayaa inta badan lagu muujiyaa kaararka.
Akhri ALSO: Sida Loo Codsado Kaarka Cagaaran | Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Waa maxay Ujeedada Kaadhka Lambarka Bulshada?
Shaqada bilawga ah ee lambarkani waxay ahayd in lala socdo xisaabaadka Lambarka Bulshada ee dadka. Hadda waxa loo qaatay qaab lagu aqoonsanayo shakhsiyaadka ku sugan Maraykanka, in kasta oo khaladaad aan caadi ahayn ay dhacaan kiisas marka nuqulku jiro.
Markii kaadhadhka hore loo soo diray xafiisyada SSA ee gobolka iyo (bilowgii) xafiisyada boostada, waxa jiray dhawr nuqul.
Nambarada Sooshal Sekuuritiga waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa in lagu tilmaamo shaqaalaha, caafimaadka, ardayga, iyo macluumaadka credit.
Waa maxay Faa'iidooyinka Haysashada Kaarka Lambarka Bulshada?
Waxaad u baahan doontaa nambarka Sooshal Sekuuritiga si aad shaqo u hesho, aad u hesho lacagta Lambarka Bulshada, oo aad u hesho adeegyada kale ee dawladda.
Kaarkaaga Lambarka Bulshada ku xafid warqadahaaga kale ee muhiimka ah hana bixin ilaa inta aad lagamamaarmaan tahay. Maskaxda ku hay in xitaa haddii aad meel dhigtay kaadhkaaga, laga yaabo inaadan u baahnayn beddelaad.
Xaaladaha intooda badan, ogaanshaha lambarkaaga Bulshada ayaa kugu filan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay beddelaad, waxaanu ka dhigaynaa habka mid fudud.
ARAG SIDOO KALE: Hantida Soo Saarka Dakhliga Ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad aado
Goorma ayaad u baahan tahay Lambarka Bulshada?
Loo-shaqeeyahaagu wuxuu ku weydiin doonaa lambarkaaga Lambarka Bulshada haddii aad bilowdo shaqo cusub. Lambarkan waxaa isticmaali doona waaxda xisaabinta ee loo-shaqeeyahaaga si ay ugu wargeliso dakhligaaga IRS iyo in lagu qoro mushaharkaaga Lambarka Bulshada Maamulka Lambarka Bulshada.
Ilaa gobolkaagu aanu lahayn cashuur dakhli, loo-shaqeeyahaagu wuxuu u isticmaali doonaa warbixinta cashuurta dakhliga gobolka.
Loo-shaqeeyayaasha ka qaybqaata E-Verify, oo ah barnaamij xaqiijinaya in shaqaalaha loo oggolaaday inay ka shaqeeyaan Maraykanka, waa inay sidoo kale ururiyaan lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga ka hor intaadan bilaabin shaqada.
Dhacdooyinka kale ee caadiga ah oo aad u baahan doonto inaad keento lambarkaaga Bulshada ayaa hoos ku taxan.
1. Markaad xisaab ka furanayso hay'ad maaliyadeed oo ku taal Maraykanka
Laga soo bilaabo 1970-kii, bangiyada waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka si ay u helaan nambarada Lambarka Bulshada ee macaamiisha ama Lambarka Aqoonsiga Canshuur Bixiyaha Gaarka ah (ITIN).
Lambarkaaga Bulshada waxaa isticmaala hay'adaha maaliyadeed si ay u hubiyaan deyntaada, uga warbixiyaan dulsaarka iyo dakhliga maalgashiga ama khasaaraha IRS, ugu warbixiyaan dulsaarka amaahda amaahda ah ee cashuurta laga jari karo IRS, oo ay u maamulaan akoonkaaga.
Hay'adaha maaliyadeed qaarkood waxay aqbali doonaan nambarka aqoonsiga cashuur bixiyaha (sidoo kale loo yaqaan Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha ama EIN ee foomamka qaarkood), kaas oo ay tahay inaad ka hesho IRS.
2. Markaad codsanayso deyn federaal ah
Markaad codsato deyn federaal ah, sida amaah arday oo federaal ah, dowladdu waxay hubin doontaa lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga si ay u hubiso inaad u qalanto.
4 Tusaale ahaan, waa inaadan ku bixin deyn kale oo federaal ah, aad haysato dhalasho ku habboon ama xaalad booqasho, iyo inta badan murashaxiinta ragga ah waa inay iska diiwaan geliyeen Adeegga Xulashada si ay ugu qalmaan amaahda ardayda federaalka.
3. Markaad Codsato Noocyada Kaalmada Dawladda qaarkood
Faa'iidooyinka shaqo la'aanta iyo dakhliga naafada ee Lambarka Bulshada waxaa sida caadiga ah maamula hay'adaha dawladda dhexe ama gobolka, kuwaas oo isticmaala Lambarada Bulshada si ay u aqoonsadaan dadka oo ay u hubiyaan in aysan raadineynin dheefo aysan xaq u lahayn.
4. Marka ay timaado Diiwaangelinta Medicare
Si dadka loogu diiwaan geliyo Medicare, Maamulka Sooshal Sekuuritiga wuxuu la shaqeeyaa Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid.
ARAG SIDOO KALE: 11 Siyaabaha Ugu Raqiisan Oo Lagu Helo Caymiska Caafimaadka 2021
5. Marka aad ka codsato baasaboorka Maraykanka
Markaad ka codsanayso baasaboor gudaha Mareykanka, sharciga federaalku wuxuu kaa doonayaa inaad keento lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga haddii aad mid leedahay. Waa in aad soo saartaa dhaarta dhaarta oo sheegaysa in aan waligaa lagu siin SSN haddii aadan mid haysan.
6. Soo Celinta Cashuurta Dakhligaaga
Lambarkan waxa ay IRS u isticmaashaa in ay la mid noqoto dakhliga aad ka warbixiso canshuur celintaada dakhliga ay soo sheegaan loo-shaqeeyahaaga iyo hay'adaha maaliyadeed. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa SSN-ka ilmahaaga haddii aad rabto inaad ku taxdo inay ku xidhan yihiin canshuur celintaada.
7. Markaad codsanayso shatiga darawalnimada
Gobolo badan ayaa kaa doonaya inaad keento lambarkaaga Sooshal Sekuuritiga marka aad codsanayso laysanka darawalnimada.
Dadka aan muwaadiniinta ahayn ee aan lahayn lambarada Bulshada waa laga dhaafay inay bixiyaan mid xaalado badan oo caadi ahaan looga baahan yahay, sida qaadashada liisanka darawalnimada, diiwaangelinta dugsiga, iibsashada caymiska caafimaadka gaarka ah, ama codsanaya kaalmada dawladda sida guryaha la kabo.
Dadka aan muwaadiniinta ahayn ee aan loo ogolayn inay ka shaqeeyaan Maraykanka ma siiso nambarada Lambarka Bulshada. Waxay sheegaysaa in haddii aanad haysan nambarka Lambarka Bulshada, xitaa bangiyada iyo shirkadaha amaahdu kuma qasbi karaan inaad mid bixiso.
Hay'adaha maaliyaddu ma awoodi doonaan inay ku sameeyaan jeegaga deynta lambarkan la'aanteed, taas oo adkeynaysa, haddii aysan suurtagal ahayn, inaad hesho kaarka deynta ama amaahda.
Haddii aadan u qalmin codsiga onlaynka ah ee kaarka Lambarka Bulshada waa in aad buuxisaa codsi warqad ah oo aad ku dirtaa ama aad keentaa xafiiska Lambarka Bulshada. Waxa kale oo laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad soo bandhigto dukumentiyada caddaynaya da'daada, aqoonsigaaga, dhalashadaada, ama sharciga socdaalkaaga gudaha Maraykanka.
Dukumeentiyada soo socda ayaa had iyo jeer la waydiiyaa kaarka Lambarka Bulshada:
Shatiga darawalnimada oo ansax ah oo laga bixiyay Maraykanka.
Kaarka aqoonsiga aan darawalka ahayn ee uu bixiyo gobol ku yaala Maraykanka.
Baasaboor uu bixiyey dalka Maraykanka.
Dukumeentiyada kale, sida diiwaanka cisbitaalka Maraykanka ama diiwaanka diimaha ee dhalashadaada, amar korsasho kama dambays ah, kaarka aqoonsiga milatariga ee Maraykanka, shahaadada jinsiyadda, kaarka aqoonsiga shaqaalaha, koobiga diiwaanka caafimaadka, kaarka caymiska caafimaadka, kaarka Medicaid, ama kaarka aqoonsiga dugsiga, waa la aqbali karaa haddii aanad haysan noocyadan aqoonsiga.
Dukumeentiga asalka ah ama nuqullo shahaadeysan oo ka yimid hay'adda soo saartay waa in la siiyaa Maamulka Lambarka Bulshada. Sida caddaynta aqoonsiga, nuqullo iyo nuqullo nootaayo ah oo dukumeenti ah lama aqbali karo. Maamulka Lambarka Bulshada waxa uu ku qiyaasay in diyaarinta iyo soo celinta dukumeentiyadu ay qaadan doonto laba ilaa afar toddobaad.
Shakhsiyaadka hadda waxay heli karaan kaadhadhka Badbaadada Bulshada iyagoo booqanaya mareegaha Maamulka Lambarka Bulshada oo ah www.socialsecurity.gov/ssnumber.
Dukumentiyada loo baahan yahay marka la codsanayo kaarka badbaadada bulshada?
Si aad u codsato kaarka lambarka bulshada, dukumeentiyada soo socda ayaa loo baahan yahay:
Waxaan kaliya aqbali karnaa dukumeentiyada qaarkood caddayn ahaan dhalashada dalka Mareykanka. Shahaadada dhalashada Mareykanka ama baasaboorka Mareykanka ayaa ah tusaalaha dukumentiyadan.
Shahaadada dhalashada waa in la keenaa. Waa inaad soo gudbisaa haddii uu mid jiro. Haddii aadan haysan shahaadada dhalashada, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan aqbalno:
Kahor intaadan shan sano gaarin, hayso diiwaan diineed oo ay ku jirto taariikhda dhalashadaada.
Shahaadada dhalashada ee cisbitaalka Maraykanka.
Qof kasta oo ka weyn da'da 12 ee doonaya nambarka Lambarka Bulshada (SSN) ee asalka ah waa inuu u yimaadaa wareysi caddaynaya inaadan haysan lambarka Bulshada.
Qaar ka mid ah waraaqaha loo isticmaali karo in lagu muujiyo in SSN-ka aan waligiis la qorin:
Baasaboor hadda ama kii hore
Diiwaanada dugsiga iyo/ama shaqada, iyo diiwaan kasta oo kale oo caddayn kara degenaanshaha muddada dheer ee meel ka baxsan Maraykanka waxa loo isticmaali karaa in aanad haysan SSN haddii aad joogtid meel ka baxsan Maraykanka wakhti dheer.
Haddii aad ku noolayd Maraykanka oo aad waydiisanayso lambarka Bulshada ee asalka ah, waxa laga yaabaa in aanu ku waydiino macluumaadka ku saabsan dugsiyadii aad dhigatay ama koobiyada diiwaanka cashuuraha ee muujinaya in aan waligaa lagu siin SSN.
Akhri ALSO: EINz lumay: Sida Loo Helo Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga/Lambarka EIN
Dukumeentiyada qaarkood oo keliya ayaa loo aqbali karaa caddayn ahaan aqoonsiga. Dukumeenti ansax ah waa inuu jiraa (aan dhicin) oo uu ku jiro magacaaga, macluumaadka aqoonsiga (dhalashada ama da'da), iyo, doorbidaya, sawir dhawaan. Tusaale ahaan, caddayn ahaan aqoonsiga, waxaan u baahan doonaa inaan aragno:
Kaarka aqoonsiga ee aan darawalka ahayn ee uu bixiyay gobolku.
Waxaan ku weydiin doonaa inaad baarto dukumeentiyo kale haddii aadan haysan mid ka mid ah dukumeentiyadan la cayimay ama haddii aadan ku kalsoonaan karin beddelka 10 maalmood gudahooda.
Dukumeenti kasta oo aad dirto waa inuu ahaadaa mid hadda jira (aan dhicin) oo ay ku jiraan magacaaga, macluumaadka aqoonsiga (taariikhda dhalashada ama da'da), iyo, doorbidan, sawir dhawaan:
Kaarka aqoonsiga ee shaqaalaha.
Kaarka aqoonsiga ee dugsiga.
Kaarka caymiska caafimaadka (ma aha kaarka Medicare).
Kaarka aqoonsiga militariga ee ka yimid Mareykanka.
Sida Loo Bedelo Kaarka Lambarka Bulshada Online?
Haddii kaarkaagu lumo ama la xado, waa inaad ka samaysaa aqoonsigaaga iyo dhalashadaada gudaha Maraykanka si aad u hesho beddelka.
Si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga, Lambarka Bulshada waxay u baahan doontaa inay aragto:
Shatiga darawalnimada ee uu bixiyay Maraykanku;
kaarka aqoonsiga ee aan darawalka ahayn ee gobolku bixiyay;
Ama baasaboor uu bixiyay Maraykanku.
Haddii aadan haysan dukumeentiyadan ama aadan ku heli karin beddelka toban maalmood gudahood, Lambarka Bulshada ayaa codsan doonta dukumeentiyo dheeraad ah, sida:
Kaarka aqoonsiga shaqaalaha;
kaarka aqoonsiga ardayga;
kaarka caymiska caafimaadka (ma aha kaarka Medicare);
Kaarka aqoonsiga militariga ee ka yimid Mareykanka
Kadib, warqad dhakhtar oo ay ku jiraan magacaaga, cinwaankaaga, lambarkaaga bulshada, iyo saxeexa, iyo sidoo kale magaca dhakhtarka, ciwaanka, iyo saxeexaaga
Haddii aanad haysan warqad dhalasho, waxaad u baahan doontaa inaad mid hesho. Waxyaabaha soo socda ayaa laga yaabaa inay aqbalaan Lambarka Bulshada:
Taariikhda dhalashadaada oo ku qoran diiwaanka cisbitaalka Maraykanka
Diiwaanada kale ee muujinaya degenaanshaha muddada dheer ee meel ka baxsan Maraykanka haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Maraykanka
Si aad u muujiso inaad tahay muwaadin Maraykan ah, waa inaad: Dukumeenti gaar ah oo kaliya ayaa hadda la aqbali karaa si ay caddayn u noqdaan dhalashada Maraykanka, iyadoo ay ugu wacan tahay dib u eegis lagu sameeyay sharciga.
Shahaadada dhalashada ee Maraykanka; baasaboorka Maraykanka
Si aad u xaqiijiso xaaladaada muhaajir, waa inaad: Haddii aad tahay muwaadin Maraykan ah, Lambarka Bulshada waxay u baahan doontaa inay aragto dukumentiyada socdaalkaaga hadda. Dukumentiyada la aqbali karo waxaa ka mid ah:
I-766 Dukumeentiga Ogolaanshaha Shaqada
Foomka Ogolaanshaha Shaqada ee Foomka I-551 oo wata baasaboorkaaga ajnabiga ah ee aan dhicin I-94 diiwaanka imaatinka/ bixida ama shaambada gelitaanka
Haddii aadan awoodin inaad internetka ka codsato kaarka, waa inaad soo gudbisaa dukumeenti ku habboon. Iyadoo ku xiran jinsiyadaada iyo nooca kaarka aad rabto, waxaan u baahan doonaa inaan baarno dukumentiyo kala duwan. Buuxi Codsiga Kaarka Lambarka Bulshada oo la xiriir xafiiska Lambarka Bulshada ee degaankaaga. Kaarka Lambarka Bulshada waa lacag la'aan. Kani waa adeeg bilaash ah.
Sida Loo Bedelo Magaca Kaarka Lambarka Bulshada
Waa inaad sidoo kale buuxisaa Foomka SS-5 si aad magacaaga ugu beddelato kaarka Lambarka Bulshada. Waa inaad keentaa dukumeenti dhawaan la soo saaray oo caddaynaya magacaaga si sharci ah loo beddelay, sida warqadda guurka, go'aanka furiinka, amar maxkamadeed oo magac beddel ah, ama shahaadada jinsiyadda. Kaarkaga cusub ee Lambarka Bulshada waxaa ku dul qoran magacaaga cusub, laakiin nambarka kaadhkaagii hore sidiisii ​​ayuu ahaan doonaa.
Dhammaan waraaqaha asalka ah ama nuqullada la shahaadiyey waa in ay bixiso hay'adda soo saartay. Nuqullo sawiro ama nuqullo nootaayo ah oo dukumeenti ah ama rasiidhada caddaynaya inaad codsatay dukumeenti ma aqbali doono Lambarka Bulshada.
Immisa jeer ayaad bedeli kartaa Kaarka Lambarka Bulshada ee maqan?
Waxa kaliya oo laguu ogolyahay saddex kaadh oo Badbaadada Bulshada ah sanad kasta iyo wadar ahaan toban kaadh oo beddel ah inta aad nooshahay.
Xuduudahani ma khuseeyaan kaadhadhka la codsado iyadoo ay ugu wacan tahay beddelka magaca ama oggolaanshaha shaqada. Haddii aad muujin karto in kaarka Lambarka Bulshada looga baahan yahay sabab rasmi ah, waxaa laga yaabaa in laguu oggolaado ka reebanaanshaha xadka kaadhka.
Su'aalaha la isweyddiiyo ee ku saabsan Sida Loo Codsado Kaarka Badbaadada Bulshada ee Cusub
Macluumaadkee ayaan u baahanahay si aan u helo kaarka Badbaadada Bulshada?
Si aad u hesho Lambarka Bulshada iyo Kaarka Cusub waxaad u baahan doontaa inaad keento ugu yaraan laba dukumeenti si loo caddeeyo da'da, aqoonsiga, iyo dhalashada Maraykanka ama heerka socdaalka ee hadda.
Shatiga darawalnimada ee Maraykanka; ama.
Kaarka aqoonsiga ee aan darawalka ahayn ee gobolku bixiyay; ama.
Waa imisa in la codsado kaarka Lambarka Bulshada?
Kaarka Lambarka Bulshada wax lacag ah lagama qaadayo. Adeegani waa bilaash.
Immisa nooc oo kaadhadhka Lambarka Bulshada ayaa jira?
Waxaa jira saddex nooc oo kaarka Lambarka Bulshada iyadoo ku xiran qofka muwaadinka ah ama heerka aan muwaadinka ahayn iyo haddii aan muwaadin ahayn ay u oggolaatay Waaxda Amniga Gudaha (DHS) inuu ka shaqeeyo gudaha Mareykanka iyo in kale.
Ma heli karaa koobi bilaash ah oo ah kaarka Lambarka Bulshada?
Helitaanka kaadhka lambarka Lambarka Bulshada (SSN) oo beddela waligeed may fududayn. Ilaa iyo inta aad codsanayso kaarka beddelka oo kaliya oo aanad isbeddel kale jirin
Sideen u codsadaa ama kaarka badbaadada bulshada?
Wixii kaalmo ah wac 1-800-772-1213 ama booqo shabakadooda www.socialsecurity.gov.
Sanadihii la soo dhaafay nambarada kaarka Lambarka Bulshada ayaa la isticmaalay si loo aqoonsado loona dabagalo shaqsiyaadka. Hadda, wax walba waa la dalbadaa marka la furayo xisaab hubin si loo buuxiyo foom bukaan oo cusub oo xafiiska dhakhtarka ah.
Waa maxay Koodhka Badbaadada Kaarka Debit-ka, maxayse muhiim u tahay?
Waa maxay Debit Virtual Ama Card Credit
10 Siyaabood Oo Jaban Oo Lacag Looga Helo Hawlgabka | 2021
Dib -u -eegista Shirkadaha Caymiska Baabuurka ugu jaban 15
Dib u eegisyada Caymiska Nolosha Salaanka 2021: Faa'iidooyinka & Khasaaraha | Sharci & Fadeexad | Sida ay u shaqeyso
Xaqiiqooyin Naxdin Leh Oo Ku Saabsan Steve Jobs Oo Aanad Maqlin
Steve Jobs, oo ah aasaasaha shirkadda Apple ayaa ku guuleystay in uu wax yar ama ka yar ka fogeeyo dadweynaha. Tan dhexdeeda…
40 Xigasho Dhiirigalin Ah Oo Ku Saabsan Shaqada Adag
Mar ka mid ah noloshaada, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad hesho ereyo nasteexo ama dhiirigelin ah. Waxa xiiso leh,…
Waa Maxay Astaanta Shaqsiyeed? Tusaalooyinka Astaanta Shaqsiga | Sida Loo Bilaabo 2022
Lahaanshaha sumad gaar ahaaneed waxa ay ku lug leedahay abuurista niche gaar ah nafta qofka aagga gaarka ah. Tani…